नेपाल आमालाई खाडीबाट चिठ्ठी - Nepal News - Latest News from Nepal
हे नेपाल आमा ! अरबको खाडीबाट प्रणाम तिमिलाई कोटीकोटी प्रणाम।
हे नेपाल आमा ! म तिम्रो कोखमा जन्म लिन पाएँ । बुद्ध र सगरमाथाको देश भन्न पाएँ । वीर गोर्खाली हौं । हामी अनि विदेशमा ईमान्दारिताको नमुना बनेर कति खुशी थिएँ हिजोसम्म । यसरी देश विदेशमा मेरो जन्मभूमीको चर्चा सुन्दै सुनाउँदै हिँडदा मन चंगा भएको थियो । घर भित्रको लडाईंले पराईलाई फाइदा हुन्छ भन्थे, हो रहेछ बल्ल चाल पाउँदै छु । एक आपसमा नमिल्नु नै हाम्रो लागि दुर्भाग्य बन्यो ।
जीवनभर कसैको दास नबनेको हाम्रो देश अहिले अरुको बोलीमा चल्ने भयो । दैव पनि हामीमाथि नै लाग्नु पर्ने ! भूकम्पले आफ्ना आफन्त गुमाएका धेरैको मुहारमा बिस्तारै चमक आउन थालेको थियो । हिजो एकअर्कामा विभेद देख्नेको भावनामा सद्भाव र समानता देखिन थालेको थियो । हिमाल, पहाड अनि तराई एक अर्काको दुस्खमा रुने र सुखमा हास्ने बन्न थालेको थियो।
हाम्रो चम्किलो मुहार, दुःमा काध शत्रुलाई पचेन !
सुन्न धेरै नै सुनिएको छ बिनासपछि विकास हुन्छ भनेर । भूकम्प जस्तो विपदबाट उठेको नेपाल कतै जापान जस्तै पो बन्छ कि भनेर नसोचेको होइन । उदाहरणको लागि यस्ता धेरै नमुना छन्, जहाँ दैवी प्रकोप र अन्य बिनासपछि नमूना बनेका छन् । तर खै किन हामी नेपालीमा कहिल्यै पनि नेपाल बनाउनु पर्छ भन्ने सोच आएन ।
आफ्ना नानी बाबुलाई विदेश अध्ययन गर्न पठाएर नागरिकका छोराछारीलाई सडकमा नांगै उतार्नु कहाँको न्याय हो ? आफ्ना छिमेकीलाई एक आपसमा लडाएर रगतको खोला बगाउनु को अर्थ के हो ? नेपाल आमा यी सडकमा उतार्ने र उत्रने सबैमा चेतनाको कमी भयो अब त तिम्रो लागि सोच्ने सन्तान जन्माउ ! नेपाल आमा यदी यही प्रकृया हुँदै गयो, यस्तै काटमार हुँदै गयो भने तिम्रो नै अस्तित्व मेटिन्छ कि भन्ने डर लागिरहन्छ । रातमा निद दिनमा जोश हराउँदै गएको छ ।
शक्ती नयाँ शक्ती, पार्टी को शक्ति धेरै सुनियो र देखियो यहाँ
अब यो पीडा, यो लडाईं, यो आतंक, पर्खाइ धेरै भयो । आशाहरु हराए अब मैले त सुनलाई पनि सुन नै हो भनेर विश्वास गर्न छाडीसकें । किनकी कतै बाहिर सुन भित्र केटाकेटीले खाने मिल्की मिठाई छ कि भनेर शंका लाग्न थाल्यो । म जस्ता लाखौं युवाहरु तिम्रो भरोसामा, तिम्रो विश्वाशमा परिवार जिम्मा लगाएर सात समुद्र पारी खाडीमा पसिना र रगतसँग पैसा साटेर देशको अर्थतन्त्र धानेका छौ अब यो विश्वाश नै टुटदै जाँदा यसको कुनै मोल छैन ।
अब हामी आउँछौं तिमीलाई बचाउन, तिमीले हामी नेपाली हुनुमा जुन गुन लगाएकी छौ आमा त्यो तिर्ने बेला आएको छ । युवाहरु जाग अब खाडीमा बसेर रमिता होइन स्वदेश फर्केर अस्मिता बचाउने समय आएको छ । केही समय पर्ख नेपाल आमा हाम्रा हातहरु तिमी रोइरहेको आँखाबाट आँशु पुछि तिम्रो मुहारमा मुस्कान छर्न आउँदैछन् ।
हालः संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)
तत्काल एमआरपी बनाउन साउदी दूतावासको आग्रह